DIY: Do-It-Yourself Modeling • Muenzaniso Wenyika
Category: DIY: DIY Muenzaniso Kugadzira
Hangekerchief mamvemve nematuru - chinowedzera kuwedzera kune dioramas
Ino nguva Yekukurumidza Zano kubva kuSzymon Pasternak - iri nyore uye inoshanda nzira yemachira, maturuini uye zvakafanana kutevedzera kwezvinhu zvemadhiorama edu uye mamodheru. Isu tinorangarira - diorama inoratidzika inoratidzika, vignette, kana kunyange imwe chete modhi, zvinowanzoitika nekuda kwekunakirwa uye ruzivo pane hunyanzvi hweiyo modhi pachayo. Mapurasitiki shanduro dzematuru dzinowanzo kuwedzerwa kune mamodheru, ...
Tinokukoka iwe kune yekutanga yekupinda muchikamu chitsva - DIY: Zviite Iwe wega Modelling. Muchikamu chino, tinopa zvigadzirwa zvakagadzirwa pamba nemidziyo inobatsira mamodheru uye vanofarira DIY. Chekutanga pane zvese - Paint Shaker kana "shaker (zvakakomba?) Yemapendi". Ona kuti sei, uchishandisa chakakurumbira chishandiso - jigsaw, zunza uye sanganisa yako yemhando pendi nemakemikari zvakanaka. Kubva…
Kupenda nebrashi ine acrylic pendi, kureva yakajairwa pendi yevaenzanisi, inomutsa rimwe dambudziko - isu tinoda kudurura madonhwe mashoma kumwe kupenda chimwe chinhu, asi pendi yakadirwa pachivharo inomesa nekukasira, inokora uye tinofanirwa kuishandisa zvakare mushure menguva pfupi. Dambudziko rakanyanya kukosha kana isu tasanganisa ruvara uye isu tinofanirwa kuisa maviri kana ...